Shina · Avrily, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Avrily, 2013
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Avrily, 2013
Japana 27 Avrily 2013
Hong Kong (Shina) 25 Avrily 2013
Hong Kong (Shina) 23 Avrily 2013
Fahalalahàna miteny 20 Avrily 2013
Japana 20 Avrily 2013
Japana 19 Avrily 2013
Fahasalamàna 17 Avrily 2013
Fahalalahàna miteny 15 Avrily 2013
Manara-maso ny resadresaky ny mpianatra ety anaty aterineto ny Anjerimanontolo eo amin'ny tanàna iray any amin'ny faritanin'i Guangdong Atsimon'i Shina, ary nanara-maso ny fihetseham-po miiba nandritra ny telo taona izao. Niteraka hatezerana tamin'ny aterineto ity vaovao ity; maro no mihevitra fa nandika ny zo amin'ny fiainana manokan'ny mpianatra ny anjerimanonolo ary mangataka azy izy ireo hanajanona ilay rafitra.
Mediam-bahoaka 14 Avrily 2013
Mialona Ny Fiverenan'ny Media Tsy Miankina Ao Myanmar Ny Shinoa
Myanmar (Birmania) 12 Avrily 2013
Niteraka fialonana sy fangidiam-panahy teo amin'ireo olom-pirenena Shinoa ny fiverenan'ny gazety tsy miankina tao Myanmar taorian'ny tsy fisian'izany gazety izany nandritra ny dimampolo taona mahery. Manontany ireo Shinoa raha mba hanao tahaka izany ihany koa ny fireneny izay hentitra amin'ny fanaraha-maso ny media ao amin'ny firenena. Taorian'ny vaovao notaterin’ny [zh] gazety Shinoa Beijing Times fa lafo...